Archive du 20180131
Marc Ravalomanana Tsy handefasana Emmoreg rehefa eto Antananarivo
Nandeha tamim-pilaminana ny fihaonan’i Marc Ravalomanana tamin’ny vahoaka tany amin’ny toerana nalehany tamin’ity herinandro ity. Nanomboka tany amin’ny lalam-pirenena faha-4 iny teny Mahitsy izany avy eo tany Ankazobe ny alatsinainy teo,
Fampihavanana sy fifidianana Nihaona tamin-dRavalomanana ny CFM
Nihaona tamin’ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana sy ny mpikatroka maromaro avy amin’ny antoko TIM, izay nahitana ny “Jeune TIM” sy ny parlemantera TIM teny amin’ny trano fonenany teny Faravohitra ny delegasionina avy amin’ny Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy na ny CFM, notarihin’ny filohany Maka Alphonse omaly tolakandro.
Fifidianana filoha sy depiote Hosakanana ireo kandida tsy miankina ?
Kotrehina tsy havela hirotsaka ireo kandida mahaleotena amin’ny fifidianana ho avy eo na amin’ny fifidianana filoham-pirenena io na ny solombavambahoaka. Azo adika avy hatrany ho fanilihana sy famerezan-jo ny olom-pirenena te hirotsa-kofidiana izany.
Antoko PSD "Olon-kafa mahomby no hofidian’ny vahoaka eo"
Nitondra ny heviny manoloana ireny vina Fisandratan’i Madagasikara 2030 nambaran’ny filoham-pirenena ireny ny avy amin’ny antoko PSD tarihan’ny filohany, Bezaza Eliane.
Governemanta Soloina ny Praiminisitra, minisitra 10 hoesorina…
Resabe omaly tontolo ny fanoloana praiminisitra sy fanovana mpikambana ao amin’ny governemanta na dia milaza ho tsy mbola mahalala ny momba izany mihitsy aza ireo mpanolotsain’ny praiminisitra sasany nanontaniana.
Tsy hita noanoa ny haren’i Madagasikara Misisika manohana kandida ny vahiny
Antomotra ny fifidianana ary manomboka misongadina ireo kandida lehibe sy ny mpanosika ao an-damosiny. Miasa be ny tontolon’ny “géo-politique” na ny fidirana an-tsehatry ny firenen-dehibe sy ny fampiasany ilay heverina ho fahefana politika ananany amina firenena iray.
Fambolena sy fanodinana ny kakao Mila ezaka be i Madagasikara
Anisan’ny tsara kalitao indrindra maneran-tany ny vokatra Kakao eto Madagasikara, raha ny fanazavana, omaly nandritry ny lanonam-panokafana seminera goavana mikasika izany natao tetsy amin’ny Carlton Anosy hifarana rahampitso.
Fanondranana kakao Mampiditra 64 miliara ariary isan-taona
Nitanisa ny olana misy any am-potony ireo mpamokatra kakao mikaon-doha etsy amin’ny Carlton Anosy, tahaka ny fahambanian’ny vidy ataon’ireo mpanangom-bokatra:
Fandravana ireo toeram-pivarotana etsy Anosy Tokony mbola hiandry ny didim-pitsarana
Velon-taraina mafy ireo mpivarotra etsy Anosy manoloana ny toeram-pivarotam-boninkazo teo aloha.
Anosimasina Itaosy 4 ny trano nianjera hatramin’ny fiandohan’ny taona
Nahatratra efatra hatreto ny trano nianjera vokatry ny ora-mikija sy ny hafanam-be mifandimby tao amin’ny fokontany Anosimasina, kaominina Bemasoandro, distrikan’Antananarivo Atsimondrano raha araka ny fanazavan’ny sefom-pokontany ao an-toerana Rtoa Rasoaniaina Malala Zoe.
Federasion’ny Kick Boxing Lany ho filoha vaovao i Mamy Be
Vita omaly tetsy amin’ny Lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina ny fivoriamben’ny federasion’ny taranja Kick Boxing eto Madagasikara izay notarihan’ny “ Commission Electorale” an’ity taranja ity ary natrehan’ny minisiteran’ny fanatanjahantena notarihan’ny DSF, Rosa Rakotozafy.
Baolina kitra vehivavy Division Elite Mbola misongadina hatrany ny Askam Itasy
Tontosa omaly teny Carion ny andro faha-3 eo amin'ny tompondakam-pirenena Diviziona Elita sokajy Vehivavy. Nisongadina tamin'ity andro farany ity ny fandresena goavana azon'ny ASKAM Itasy 7 no ho 0 nanoloana ny AS COMATO Atsimo Andrefana.
Mandalo tokoa ny zava-drehetra. Tsy misy afaka handiso an’izany. Fiteny matetika ny hoe ny mpitondra mandalo fa ny vahoaka mitoetra.
Lalana eto an-drenivohitra Hampiasa teknika manara-penitra ny CUA
Na dia nailika foana aza ny kaominina an`Antananarivo Renivohitra (CUA) tamin`ny asa fanamboarana fotodrafitrasa dia naverina taminy ny andraikitra amin`ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo izay tena tsy manara-penitra ny fanatanterahana izany satria potika sy rava tokoa ny lalana na dia nanentsina sy nanamboatra ny sasantsany aza ny fitondrana foibe.
Tsy mpangalatra jiro ny AAA Nivoaka ny porofo tsy azo lavina
Efa tamin’ny 3 novambra 2017 ny Jirama no nitory an’i Marc Ravalomanana, izay nambara fa nangalatra herinaratry ny JIRAMA. Nambara ihany koa fa ny tranon’ny filoha teo aloha mifanakaiky amin’ny orinasa no tena misy ilay fangalarana jiro.
Gargotte noravana etsy Anosy Maty antoka ana hetsiny maro isan’andro
Nanomboka namoaka ny entany teo ivelany ireo mpivarotra hani-masaka manamorona ny ranon’Anosy tratran’ilay asa fandravana tanterahin’ny ministeran’ny fanajariana ny tany, omaly.